Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Inqwelomoya entsha esuka eWashington isiya eLagos, eNigeria kwii-United Airlines ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • Iindaba zaseNigeria zokuPhula • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
I-United Airlines yazisa ngenkonzo yomoya entsha ukusuka eWashington, DC ukuya eLagos, eNigeria.
I-United Airlines izakusebenzisa iinqwelomoya ezintathu ngeveki phakathi kweWashington, DC kunye neLagos, eNigeria ejonge ngoNovemba 29, 2021.
Inqwelomoya entsha iya kubonelela ngonxibelelwano olufanelekileyo lokuma kwindawo ezingaphezu kwama-80 kwiindawo zaseMelika.
I-United Airlines ibhengeze namhlanje ukuba inkonzo entsha phakathi kweWashington, DC kunye neLagos, eNigeria izakuqala nge-29 kaNovemba (phantsi kokuvunywa ngurhulumente). I-airline izakusebenzisa iinqwelomoya ezintathu ngeveki ezidibanisa ikomkhulu lase-US kunye nesona sixeko sikhulu saseNigeria, ekwindawo ephambili eNtshona Afrika kubahambi baseMelika.
“Le nqwelo moya intsha isiya Lagos bekulindelwe kakhulu ngabathengi bethu kwaye inikezela ngenkonzo yokuqala engapheliyo phakathi kweWashington, DC neNigeria, kunye nokufikelela ngokulula, kwindawo enye kwiindawo ezingama-80 kulo lonke elaseMelika kubandakanya iHouston neChicago, utshilo uPatrick Quayle, United Airlinesusekela-mongameli wenethiwekhi kunye nemanyano. "Egameni lalo lonke uManyano lweUnited States singathanda ukubulela ngokungazenzisiyo kwiNigerian Civil Aviation Authority kunye neSebe lezoThutho laseMelika ngokuxhasa izicwangciso zethu zokubonelela ngale nkonzo."
"Kulilungelo kuthi ukusebenza nabalingane bethu kwiUnited Airlines ukwamkela unxibelelwano lwesibini olungagungqiyo ukusuka eDulles International ukuya kwilizwekazi laseAfrika," utshilo uCarl Schultz, olibambela likamongameli wophuhliso lweshishini leenqwelo moya kwi Metropolitan Washington Airlines Authority. "ILagos ijoyina phantse i-50 yezinye iindawo ezingamisiyo kwihlabathi liphela ezikhoyo ngoku ezinikezelwa liSango leNgingqi yeSizwe kwihlabathi."
United Airlines iya kusebenza kule ndlela nge iBoeing I-787 Dreamliner enezihlalo ezingama-28 ze-United Polaris ezihleli phantsi, izihlalo ezingama-21 zePrimiyamu kunye nezihlalo zoqoqosho zeprimiyamu, izihlalo ezingama-36 zoQoqosho kunye nezihlalo ezili-158 zoqoqosho oluqhelekileyo. Iindiza ziya kusuka eWashington, DC ngoMvulo, ngoLwesine nangoMgqibelo kwaye zibuye zibuye Lagos NgoLwesibini, ngolwesiHlanu nangeCawa.
Le nqwelomoya intsha yakhela kulwandiso lwe-United ukuya e-Afrika kwaye iqinisa isikhundla sobunkokheli be-United e-Afrika ukusuka kwindawo ye-DC metro, kunye neenqwelomoya ezininzi kwilizwekazi kunayo nayiphi na enye inqwelo moya. Ngalo nyaka nje, i-United isungule inkonzo entsha phakathi kweNew York / Newark naseGoli, eMzantsi Afrika naphakathi kweWashington, DC neAccra, eGhana. Kwaye ngalo Disemba nangoJanuwari, iUnited izakwandisa inkonzo yayo iye eAccra ukusuka kwiinqwelomoya ezintathu ngeveki ukuya mihla le * abathengi beza ekhaya ngeeholide zasebusika. I-United ikwabuyisela inkonzo yayo ethandwayo phakathi kweNew York / Newark kunye neKapa, ​​Mzantsi Afrika ngoDisemba 1.
Iindiza ezintsha zase-United zithobela imigaqo-nkqubo yelizwe ngalinye ye-COVID-19 kwaye abathengi kufuneka bajonge iimfuno zokuya kwindawo ngaphambi kokuhamba.